Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu New York JFK na-aga Lisbon na TAP Air Portugal ugbu a
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa ozi na Portugal • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Ụgbọ elu New York JFK na-aga Lisbon na TAP Air Portugal ugbu a.
Ọnụ ụzọ ámá iri nke North America nke TAP nwere ugbu a Boston, Cancun, Chicago, Miami, Montreal, Newark, New York (JFK), San Francisco, Toronto, na Washington, DC (Dulles).
TAP Air Portugal ji ụgbọ elu si Lisbon laghachi ọdụ ụgbọ elu JFK na Newark nke New York.
TAP ga-arụ ọrụ nkwụsịtụ kwa ụbọchị site na JFK site na Nọvemba 7 ruo Jenụwarị 31, 2022, na-ebelata ụgbọ elu anọ kwa izu site na February 2 ruo Maachị 25.
Ụgbọ elu ọhụrụ ahụ, TP 210, ga-apụ JFK n'elekere 10 nke abalị, rute na Lisbon n'elekere 9:30 nke ụtụtụ, n'ụtụtụ echi ya.
TAP Ikuku Portugal na-arụkwa ọrụ ọzọ site na ọnụ ụzọ ámá 7 nke US na nloghachi ọrụ site na New York John F Kennedy International Airport abalị ụnyahụ. Site na ọrụ kwa ụbọchị site na JFK ruo Jenụwarị na maka oge ọkọchị, ndị New York ga-enwe ụgbọ elu atọ kwa ụbọchị na Lisbon na TAP, site na JFK na Newark Liberty International.
mgbata ga-arụ ọrụ kwa ụbọchị n'akwụsịghị akwụsị si JFK site na Nọvemba 7 ruo Jenụwarị 31, 2022, na-ebelata ụgbọ elu anọ kwa izu (na Mọnde, Wednesde, Fraịde na Sọnde) site na February 2 ruo Machị 25. JFK Ọrụ ga-arụkwa ọrụ kwa ụbọchị ọzọ maka ọkọchị, malite na Machị 27.
Ụgbọ elu ọhụrụ ahụ, TP 210, ga-apụ JFK n'elekere 10 nke abalị, rute na Lisbon n'elekere 9:30 nke ụtụtụ, n'ụtụtụ echi ya. Ụgbọ elu na-alọghachi, TP 209, ga-ahapụ Lisbon n'elekere ise nke uhuruchi, rute na JFK n'elekere asatọ nke abalị.
A ga-eji ụgbọ elu TAP's Airbus A330-900neo rụọ ụzọ ọhụrụ a, na-egosipụta ikuku ikuku ọhụrụ site na ụlọ Airbus.
Nhazi na ime ụlọ ahụ na-emepụta ọnọdụ emelitere, nke ọgbara ọhụrụ, nwere oche nwere nrịanrịa miri emi na Economy, na mkpuchi mkpuchi nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na isi awọ, yana ọtụtụ ụkwụ na EconomyXtra, na ndo nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na uhie.
Oche oche na akụ na ụba mgbe niile bụ inch 31, ebe EconomyXtra na-enye mgbakwunye inch atọ nke legroom, maka pitch nke 34 inch. A330-900neo nwere oche 168 na Economy yana oche 96 na EconomyXtra.
N'ime klaasị azụmaahịa Executive nke TAP, TAP na-enye oche iri atọ na anọ dị larịị zuru oke nke karịrị ụkwụ isii n'ogologo mgbe ọ nọkwasịrị. Oche klaasị azụmahịa TAP gụnyere oghere maka ma USBs yana plọg eletrik nke ọ bụla, njikọ maka ekweisi, ọkụ ọgụgụ onye ọ bụla, na ohere ndị ọzọ - gụnyere ọtụtụ ụlọ nchekwa.
Ọnụ ụzọ ámá iri nke North America nke TAP nwere ugbu a Boston, Cancun, Chicago, Miami, Montreal, Newark, New York (JFK), San Francisco, Toronto, na Washington, DC (Dulles). Na Disemba 10, TAP Ikuku Portugal ga-ewebata ọrụ Caribbean mbụ ya, yana ọrụ anaghị akwụsị akwụsị n'etiti Lisbon na Punta Cana na Dominican Republic, TAP's 11.th North America ọnụ ụzọ ámá.